အတော်များများက drivers တွေကိုပုန့်အသတ်အာမခံသောအရာကို၏မေးခွန်းကိုစိတ်ဝင်စားဖြစ်ကြသည်။ ဒါဟာမသာနိုင်က၎င်း၏အဲဒါကပိုင်ရှင်, ဒါပေမယ့်လည်းတတိယပါတီများမှမှစက်လည်ပတ်နိုင်ဖို့အတွက်မူဝါဒ၏ဒီလိုမျိုးဖြစ်ပါတယ်။ မပါဘဲအာမခံ ...
ကမ္ဘာအနှံ့ကိုအသုံးပြုအသုံးအများဆုံးငွေကြေး, ဘဏ္ဍာရေးစျေးကွက်အတွက်လုပ်ငန်းစဉ်များအပေါ်တစ်ဦးအကြီးသြဇာလွှမ်းမိုးမှုရှိသည်။ တစ်ခုချင်းစီကိုငွေကြေးအထူးသင်္ကေတအားဖြင့်ခေါ်လိုက်ပါမယ်ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကသူတို့အဆိုမှတ်မိစေသည် ...
လူတွေဟာဘယ်နေရာမှာအရေးတကြီးငွေချေးဖို့စဉ်းစားနေကြသလဲ။ ဒီမေးခွန်းကတကယ်အရေးကြီးတယ်။ အမှန်မှာကြိုတင်မမြင်နိုင်သောအခြေအနေများမှမည်သူမျှလုံခြုံမှုမရှိပါ။ ဒီတစ်ခါလည်း ... "nth" ပမာဏကိုလိုအပ်လိမ့်မည်။
ချစ်ကြည်ရေး - ကဘာလဲ? ချစ်ကြည်ရေး၏တန်ဖိုးကိုဆုံးဖြတ်
ဘယ်လိုမကြာခဏကျွန်တော်ထိုဝန်ဆောင်မှုများအတွက်သို့မဟုတ်ကျနော်တို့ငါ့ကိုအကြံပေးသောအမျိုးမျိုးသောကုမ္ပဏီများကတောင်းသလဲ? ငါတို့သည်အဘယ်ကြောင့်အများဆုံးအကြီးအကျယ်ကြော်ငြာဖြစ်ကြောင်းထုတ်ကုန်ကိုဝယ်သလဲ? ဒါဟာကိုယ့်ထုတ်လုပ်သူတွေအများကြီးကိုမဖြုန်းပါ ...
"Steam" မှငွေထုတ်ယူရန် ဖျက်ဆီးခြင်းဒဏ္Myာရီများ
ဒီတော့ဒီနေ့မင်းတို့ Steam ကနေပိုက်ဆံဘယ်လိုထုတ်ယူရမယ်ဆိုတာမင်းတို့နဲ့အတူတွေ့ရမယ်၊ ငါတို့ရဲ့စိတ်ကူးဘယ်လောက်လဲဆိုတာစမ်းကြည့်ဖို့လည်းကြိုးစားမယ်။ အကြောင်းမှာသုံးစွဲသူများစွာသည်ဤပြbyနာကြောင့်ရှုပ်ထွေးနေသည်။ ဒါ ...
မေးခွန်းနော်ဝေအတွက်ငွေကြေးဘယ်လိုယနေ့အကြောင်းမေးသောအခါ, ထို့နောက်ရုံတိုင်းပြည်၏တည်နေရာသတိရပါ။ ဥရောပတိုက်တွင်နော်ဝေ အကယ်. , ငွေကြေးယူရိုဖြစ်သင့်သည်။ ဒါပေမဲ့ဒီ ...
မသင်မနေရအာမခံဥပဒေအချိန်ကြာမြင့်စွာသောကြောင့်အာမခံ MTPL မူဝါဒအဘို့ကိုထောက်ပံ့ပေးလာ၏။ ထိုအသင်ဤစာရွက်စာတမ်းထဲက run, သို့မဟုတ်သင်အိမ်ပြန်, ဒါမှမဟုတ်အာမခံဆေးရုံကဆင်းမှာကျန်ရစ်လျှင် ...
“ Pension-plus” - Sberbank အတွက်အလှူငွေ။ စည်းကမ်းချက်များနှင့်အကျိုးစီးပွား
Sberbank သည်ရုရှားနိုင်ငံ၏အကြီးဆုံးဘဏ္financialာရေးအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ သူ၏ဖောက်သည်များမှာစီးပွားရေးကိုယ်စားလှယ်များနှင့်တစ် ဦး ချင်းစီသာမကပျမ်းမျှဝင်ငွေရှိသောသာမာန်ရုရှားလူမျိုးများဖြစ်သည်။ သော်လည်း ...
စိန့်ပီတာစဘတ်အတွက် LCD ကို "နယူး Ohta": ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း, ဖော်ပြချက်များနှင့်ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း
ယနေ့တွင်စိန့်ပီတာစဘတ်၏အဖြစ်တက်ကြွစွာဆောက်လုပ်ရေးဆင်ခြေဖုံးများနှင့်မြို့ဆင်ခြေဖုံးရှိတယျ။ အဆိုပါအမိုးအကာအပူတပြင်းလိုအပ်နေအတွက်မြို့တော်များ၏မြို့သားတို့, ဒါပေမယ့်မြို့သူမြို့သားကိုယ်တိုင်က၎င်း၏တန်ဖိုးကိုပင်အနည်းဆုံးဂုဏ်သိက္ခာဧရိယာထဲမှာတစ်ဦးတိုက်ခန်းကိုဝယ်နိုင်အောင်မြင့်မားသည် ...
တိုင်းပြည်အတွင်းမိမိအိမျ၏အိပ်မက်မက်မရမညျ့သူဖြစ်ကောင်းမဟုတ်ယောက်ျားသည်။ ဟုတ်ပါတယ်, ၎င်း၏ပြင်ဆင်မှုများအတွက်ကွဲပြားခြားနားသောနည်းလမ်းများရှိပါသည်ဥပမာ, သငျသညျအဆင်သင့်လုပ်တိုက်ခန်းကိုဝယ်လို့ရပါတယ်။ သို့သော်များစွာသောအကြောင်းအိပ်မက်မက် ...
ဘဏ္ဍာရေးအကျပ်အတည်း, ငွေကြေးဖောင်းပွမှု, မည်သည့်မူဝါဒအပြောင်းအလဲများနေသော်လည်းအိမ်ရာများအတွက်ဝယ်လိုအားအမြဲရှိလိမ့်မည်။ ကျောင်းသားများဆောင်ထားခဲ့ဖို့ဘွဲ့ရပြီးနောက်အချို့သောစုံတွဲများ, ကံမကောင်း, ကွာရှင်းခြင်းနှင့်ဖလှယ်ရန်အတင်းအကျပ်ခိုင်းစေရ ...
ဒါဟာပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးတစ်ဘဏ်ချေးငွေထုတ်ယူ, ပြီးတော့ကြောင့်အခြေအနေသို့မဟုတ်ရိုးရိုးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ပေးဆောင်ဖို့တွန့်ဆုတ်၏, တစ်ဦးကိုလစဉ်ကြေးပေးဆောင်မတွေ့ကြုံတတ်၏။ ထိုကဲ့သို့သောအခြေအနေများမှာဘဏ္ဍာရေးအဖွဲ့အစည်းကနေအကြောင်းကြားစာ ...
14 အဆိုပါဒေတာဘေ့စဖို့ query လုပ်တဲ့အခါ, 0,403 စက္ကန့်ကျော် Generate ။